Ronnaskolan oo kor u qaadey natiijada waxbarashada - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Ronnaskolan sannad kasta 100 ardey dalka ku cusub ayaa bilowda. Foto: Markus Linden/SR
Ronnaskolan oo kor u qaadey natiijada waxbarashada
La daabacay fredag 7 februari 2014 kl 15.02
Sannad kasta iskuulka Ronnaskolan ee magaalada Södertälje waxaa bilaaba 100 caruur ah oo ah soogalooti dalka ku cusub. Sidoo kalane waxaa iskuulkas ku sii yaraanaya ardeyda asalkooda yahay Iswiidhish. Labo sanno ka hor iskuulkan ardeyda dhigata kalo bar keliya ayaa u gudbi jirtey dugsiga sare halka ay maanta tiradaas isbadashey oo ay korartey. Maanta afartii sadex ayaa ardeyda u gudubta dugsiga sare, taas oo tusaale u ah in iskuulkan ku socdo iska dhaqida shaabatii ku dhegney oo aheyd in uu yahay mid liita, sida ay tiri maamulaha iskuulkan Lina Axelsson Kihlbom.
- Iskuulka ayaan imaadaa, waxaana ku qaataa xili wacan, ardeyda ayaan la shaaxaa, wax dhibaato ah lamo kulano, haddi ay ahaan la heyd rabsho ama wax kale. Ardeyduna dadaal badan ayey sameyaan. Sheekada ah in ardeyda soogalootiga ah ama dalka ku cusub ay yahiin dambiilayaal qaylo badan oo ay ku adag tahay waxbarashada, taas wax kama jiraan ayey trir.
Ronnaskolan magaalada Södertälje ayaa kamid goobaha dalkan Iswiidhen sida cad looga dareemayo dagaalka ka holcahaya dalka Suuriya. Asbuuc kasta ayey iskuulkan bilaabaan ardeyda dalka ku cusub oo wax ka yar labo sanno dalkan ku sugnaa badan koodna ka soo cararey dagaalada Suuriya. Arintaan oo dabcan culeys ku ah iskuulkan, laakiin ahaan aheyn culeys ku cusub iskuulkan, waayo iskuulka waa la qabsadey maareynta culeyskan, sida ay tiri maamulaha iskuulka Lina Axelsson Kihlbom.
- Xeel-dheerayaal baan ku noqoney maareynta arintan, waxaan xeel-dheerayaal ku nahey badbadelida howlaha iskuulka si ay kooxa ardeyda kalo gedisan uga helaan waxey doonayaan. Sidoo kale waxaan ku wanaagsanahey luuqadaha iyo horumarinta tacliinta. Waxaan qabaa in Ronnaskolan heysto macallimiinta ugu wanaagsan, ayey tiri.
Ardedya iskuulkan bilowda ayaa waayo aragnimo shoog badan leh kalo yemid Suuuriya kuwaas oo ay heysato xaalad cadaadis xoog badan oo xaga maskaxda ah. Laakiin ardeydan marka ay iskuulka joogaan lagama dareemo midaas ayey tiri maamule Lina Axelsson Kihlbom. Waxeyn qabtaa in iskuulka u yahay ardeyda hoy ay ka magan galaan waqti gaaban xaadaadis maskaxeed ee heysta.
Markii 15 sanno jir Gabriel bilowdey Ronnaskolan waxey welwel ka qabtey waxey iskuulka kalo kulmi doonto, in ardeyda kale aqbali doonaan iyo in kale oo ay na saaxibo heli doonto. Laakiin wax weliba si wanaagsan bay noqdeen sida ay tiri
- Markaan halkaan bilaabey ma dareemin in aan ahey qof shisheeye ah, halkaan waxaan kulo kulmey Suuriya, Irak iyo waddomo kale oo badan, marka waxaan dareemey dabacsanaan fiican, ayey tiri, ayey tiri Gabriel
Waan ku waananahey soo dhaweynta ardeyda, ayey tiri macallimad Theres Alwert, laakiin wxaa dhibaato noqda kara in ardey sidaas u badan ku hadlaan luuqad shisheeye, ayey raacisey
- Faa’ido darada waxaa laga yaabaa in ay tahay in ardeyda noqdaan caajislowyaal oo aysan barashada luuqada afka-iswiidhiska ku dadaalin madaama ay iskuulka isla dhigtaan ardey badan oo af carabi ku hadasha. Laakiin waqti kaste ayaan kalo hadalnaa muhiimada qah in ay bartan afiswiidhishka, Ingriiska, xisaabta iyo weliba maadooyinka aas’aasiga ah, waxaan u sheegnaa in aysan soogaleynin dugsiga sare haddi aysan maadooyinkan baranin, ayey tiri.
Waqti gaaban ayaa Ronnaskolan si weyn u hagaajiyey natiijada waxbarashada. Intii u dhaxeysey sannadkii 2012-2013 waxaa kordhey tirada ardeyda dhameysa kalaaska sagaalaad oo heshey shahaado ay ku galaan dugsiga sare tiradaas oo markii hore aheyd boqolkii 55 ayaa hadda ah boqolkii 75.
Balse inkastoo iskuulka hagaajiyey natiijadiisa haddana waxaa halkeeda ka sii socotey ardeyda asalkooda yahay Iswiidhishiin oo iskuulka iskaga kaga baxey. Waxaan maanta iskuulkan dhigta ardey faro kutiris ah oo Iswiidhishiin dhalad ah. Xoriyada doorashada iskuulka ayaa sababtey in iskuulada kalo qobqobnaadaan, ayey qabtaa maamulaha Ronnaskolan Lina Axelsson Kihlbom
Waxeyna sidoo kale qabtaa in waalidiinta caruurtooda kalo baxa iskuulada ay soogalootiga ku badan yahiin in ay si qaldan u fikarayaan.
- Waxaa jira sawir malo awaal ah oo oranaya hadii iskulka ilamaheygu dhigtaan ay sidoo kale dhigtaan ardey dalka ku cusub markaas ilmaheyga waxbarashadooda wey liidmeysaa. Laakiin sidaas ma ahan balse waa badalkeeda. Markey ardey dalka ku cusub bilaabaan kalaaska macallimiinta waxey ku qasbanyahiin in ay waxbaridda waafajiyaan xalaada cusub oo ay ka dhigaan mid cad korna u soo qaadaan maadooyinak luuqadaha taas oo ardeyda ku dhiiro kelin dheerad ah siineysa oo waxbaridda sii wnaajineysa, ayey tiri Lina Axelsson Kihlbom oo ah maamulaha iskuulka Ronnaskolan magaalada Södertälje.